‘सक्किगोनि’ दर्शकले मन पराए हेलिकप्टर उडाएको! – Next World Online
Next World Online > मनोरन्जन > ‘सक्किगोनि’ दर्शकले मन पराए हेलिकप्टर उडाएको!
‘सक्किगोनि’ दर्शकले मन पराए हेलिकप्टर उडाएको!
काठमाडौं । हास्य टेलिचलचित्र ‘सक्किगोनि’ युनिटले कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण केही समय रोकिएर पुनः सुरु भएको नयाँ श्रृंखला दर्शकले रुचाएको बताएको छ । पहिलाका श्रृंखलाभन्दा पछिल्लो श्रृंखला दर्शकले अझ बढी रुचाएको ‘सक्किगोनि’ युनिटको दाबी छ ।
सिजन–२ भनेर करिब ९ महिना पछि दर्शक माझ आएको ‘सक्किगोनि’ युनिटका कलाकार तथा स्टोरी, स्क्रिन प्ले तथा डाइलग निर्देशक मध्येका एक अर्जुन घिमिरे (पाँडे) दर्शकले पहिलाका श्रृंखलाभन्दा धेरै सिजन–२ मन पराएको बताएका छन् । “कथा, डाइलग, दृश्य, स्क्रिन प्ले पहिलाको भन्दा राम्रो भनेर दर्शकले भनिरहनु भएको छ,” अर्जुन भन्छन्, “श्रृंखला निर्माणका लागि हामीले गरेको खर्च तथा मेहनत देखेर चलचित्रभन्दा राम्रो भन्ने प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं ।”
ओएसआर युट्युब च्यानलबाट अपलोड गरिएको श्रृंखला केही समयमा नै ट्रेन्डिङ ५ भित्र परेको छ । ‘सक्किगोनि’ युनिटले पहिलो श्रृंखला निकै ठूलो क्यानभासमा खिचेको छ । काठमाडौं र चितवनमा खिचिएको श्रृंखलामा युनिटले हेलिकोप्टरसमेत प्रयोग गरेको छ ।
“कथाले ठूलो क्यानभास माग्यो । हामीले कथा अनुसार छायांकन गर्यौं । सक्किगगोनिलाई राम्रो बनाउन हामीले कुनै बाँकी राखेनौं,” अर्जुन भन्छन्, “दर्शकको यस्तै साथ, सहयोग र प्रतिक्रिया पाउँदै गएको खण्डमा हामी अझै परिष्कृत हुँदै आउने छौं ।”
आफ्नी प्रेमिका अष्ट्रेलिया गएपछि वियोगमा छटपटाएका उनका प्रेमी जग्गा धितो राखेर अष्ट्रेलिया जान पैसा लिएर काठमाडौं लागेपनि सहरको रंगीन दुनियामा भुलेर अलपत्र परेको कथा सक्किगोनीले देखाएको छ ।
दीपक आचार्यले निर्देशन गरेको सिरिजमा अधिकांश पुरानै कलाकार छन् । कोरोनाका कारण गत चैतबाट रोकिएको श्रृंखला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै पुनः सुरु भएको हो ।
Previous Postबेनिशालाई बिहेको दबाब
Next Postअन्तिम मौका ओली र देउवालाई